Waxyaabaha Sababa In Raggu Ku Niyad Jabaan | Ragga Stylish
Maxay ragga u niyad jabaan?
Paco Maria Garcia | | La cusboonaysiiyay 25/04/2017 12:50 | nololeedka, Caafimaadka
Rag badan ayaa u janjeera inay diidaan cadeymaha: ragga sidoo kale way niyad jabaan Waqtigan xaadirka ah, waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah xumaanta bulshada casriga ah, cudurada cudurada oo ay tahay in loo daweeyo sida ugu haboon.
Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka, in ka badan 350 milyan oo qof ayaa la ildaran niyad jab. Wadartaas, ragga sidoo kale waxay gaarayaan boqolkiiba muhiim ah.
Waa maxay sababa waa niyadjabka ugu badan ee ragga ku dhaca? Waxaan arki doonaa xoogaa hoos ah.
3 Isbedelada maskaxda
4 Nolol fadhiga iyo jimicsi la’aan
5 Xaaladaha naxdinta leh
ka dhibaatada iyo dhibaatooyinka lamaanaha badanaa waa sababaha ugu badan ee keena murugada. In kasta oo mararka qaarkood aynaan ka warqabin, lamaanahayagu wuxuu leeyahay culeys gaar ah oo sare oo qaab dhismeedka maskaxdeena ah. Markuu jiro kala go 'ama halisteeda, waxaan galnaa nooc ka mid ah niyad-jab la filayo duel la abuuri lahaa.
Waa inaad ka taxaddartaa xaaladdan maskaxeed ee la xiriirta dhibaatada xiriirka. Hal shay ayaa ah diiqad ka timaadda burburka soo socda, iyo mid kale waqti aad u xun ku qabno khilaaf kasta oo naga dhexeeya lamaanahaaga.
El culeys shaqo iyo walwal waxay, marar badan, la xiriiraan diiqadda ragga. Iyo inbadan markii aysan jirin jawi wanaagsan oo shaqada ah, xiisado maalinle ah ayaa soo ifbaxa, dhibaatooyin ka yimaada madaxa ama maareeyaha, iwm.
Ha iloobin taas shaqadu waa muhiim, laakiin caafimaadka ayaa ka horreeya.
hay dadka, dabiici ahaan, waxay halis badan ugu jiraan niyad-jabka. Sababta ayaa ah isbeddelada maskaxda ee yar yar ee dheereeya xaaladaha murugada leh ee aan wada noolnahay, halkii aan ka cabbiri lahayn.
Nolol fadhiga iyo jimicsi la’aan
Waxaa jira daraasado la sameeyay oo muujiyay taas qaab nololeed xad dhaaf ah waxay kordhisaa fursadaha niyad jab.
Xaaladaha naxdinta leh
Ragga dhibaataysan dhacdo naxdin leh waxay leeyihiin fursado badan oo ay ku dareemaan shucuur sida cabsi, gargaar la'aan iyo walaac. Dareenadan ka dib, waxaad si tartiib tartiib ah u geli kartaa geedi socodka niyadjabka.
Ilaha sawirka: Gazette Mexico / Isbaanishka adduunka
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Maxay ragga u niyad jabaan?
Afar isku-darka ciyaaraha fudud guga
Caadooyinka xun ee ilkahaaga ay tahay inaad iska ilaaliso